Noroahin’i Shina ireo Amerikana mpanora-gazety avy amin’ny seha-baovaon’i Etazonia, fandrahonana ny fahalalahan-gazety izany hoy ny mpitily · Global Voices teny Malagasy
Voatosi-bohontanana tamin'ny 18 marsa ny mpanangom-baovaon'i Wall Street Journal miisa telo
Voadika ny 19 Mey 2020 8:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, Español, Ελληνικά, عربي, English
Sary avy amin'ny the Stand News.
Tamin'ny 18 marsa i Shina nanambara ny fandroahana ireo Amerikana mpanoratra amin'ny gazety lehibe, izay tsy iza fa ny New York Times, ny Wall Street Journal ary ny Washington Post. Azo ampiharina amin'i Hong Kong sy Macau izao fepetra izao na dia heverina ho mizakatena ao anatin'ilay fotokevitra manao hoe “Firenena iray, rafitra roa” aza ireo tanàna samy zanatany taloha ireo.
Nokianin'ny Reporters Sans Frontières, fikambanana iraisampirenena mpitily ny fahalalahan-gazety, izao fanapahan-kevitr'i Beijing izao ho “hetsi-pamoretan'i Shina iadiany amin'ny fahalalahan-gazety eto ambonin'ny tany” ary nosoritany ny lanjan'ny fangaraharahana ao anatin'izao areti-mandringana COVID-19 izao.
Navoitran'i Shina tamin'ny fanambaràna nataony tamin'ny 18 marsa fa izao fihetsika izao dia setrin'ny fanondroan'ny governemantan'i Etazonia ny seha-pampitam-baovao shinoa dimy ho (mpiasa) mpitsikilon-governemanta vahiny tamin'ny 19 febroary. Mila misoratra anarana ao amin'ny Departemantam-panjakana amerikana ireo mpiasa ao amin'ny sehatra famoaham-baovao shinoa dimy izay tononina manaraka etoana: Xinhua, China Global Television Network (CGTN), China Radio International, China Daily, ary ny Hai Tian Development USA. Mila milaza ny fananany tsy mihetsika ao Etazonia ihany koa ireo seha-baovao ireo ary mangataka alalana rehefa hividy fananana mifaka amin'ny manaraka.
Tamin'ny andro nanaovan'ny Departemantam-panjakana Amerikana fanapahan-kevitra ihany koa i Shina no nandroaka mpanora-gazetin'i Wall Street Journal miisa telo rehefa tsy nety niala tsiny tamin'ilay tsanganan-kevitra manoritra an'i Shina ho “ilay tena mararin'i Azia” ny gazety.
Tamin'ny 3 marsa ny governemantan'i Etazonia namoaka fetran'isan'ny mpiasa ho 100 indray fa tsy 160 intsony ho an'ireo sehatra fampitam-baovao shinoa voatonona etsy ambony. Nilaza ny sekreteram-panjakan'i Etazonia, Mike Pompeo, fa izao famerana izao dia valin-kafatra amin'ny “kendaroroka sy fampitahorana mihamafy” ataon'i Beijing amin'ireo Amerikana mpanora-gazety ary kendrena izao “hampitoviana lenta ny kianja filalaovana” [fitsipi-dalao] sy “handrisihana an'i Beijing hizotra amin'ny fomba fanao ara-drariny sy mifamaly tsara kokoa” amin'ireo gazety vahiny any Shina.
Nanapa-kevitra ny handroaka mpanora-gazety amerikana bebe kokoa anefa i Shina. Notakian'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny ireo mpanora-gazety amerikana rehetra miasa amin'i New York Times, ny Wall Street Journal ary ny Washington Post hamerina ny karatra maha-mpanora-gazety (izay efa ho lany daty amin'ity taona ity ihany) ao anatin'ny 10 andro. Tombanana fa mpanora-gazety 13 farafahakeliny no ho tratran'izany fepetra izany.
Etsy ankilany, notakian'ny minisitera ihany koa iretsy gazety telo voatonona etsy ambony miampy ny Time Magazine sy ny Radio Free Asia hampanoratra anarana ny ekipa ao aminy, ny sata ara-bolany sy ireo vola miasa ao Shina any amin'ny manampahefana shinoa. Nosoritan'ny fanambaràna ihany koa fa tsy ho afaka ny hanangom-baovao avy ao Hong Kong sy Macau ireo mpanora-gazety noroahina ireo.
Nandritra ny briefing nifanaovana tamin'ny gazety ny mpitondratenin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Geng Shuang no nilaza fa “voatery” i Shina handray fepetra manao lasibatra ny seha-baovao sy ny mpanora-gazetin'i Etazonian'i Amerika raha tsy manova ny politikany i Etazonia.
Ampolony taona maro izao i Hong Kong no edenan'ny vahiny mpanora-gazety miasa ao Azia noho ny sata manokana mihatra aminy miorina amin'ny hoe “Firenena Iray, Rafitra Roa”. Ho setrin'ny politika vaovaon'i Beijing, naneho hevitra i Edward Yau Tang-wah Sekretera misahana ny Varotra sy ny Fampandrosoana ara-toekarenan'i Hong Kong fa ho ampiharin'ny governemanta ny fotokevitry ny “Firenena Iray, Rafitra Roa”.
Manahiran-tsaina tokoa izany valiny izany satria Lalàna Fototra ao Hong Kong ny fiantohana ny fahalalaham-pitenenana sy ny fanorata-gazety hatramin'ny nampanankery azy tamin'ny taona 1997. Voalaza ao ihany koa fa mety ho ampiharin'ny governemantan'i Hong Kong ny fanaraha-maso ny fidirana, fonenana ary ny fivoahan'ny olona avy any amin'ny faritra sy firenena vahiny. Mandritra izany fotoana izany, tamin'ny taona 2018, notsipahan'ny governemantan'i Hong Kong ny fanavaozana ny visa-n'i Victor Mallet, filoha lefitry ny klioban'ny masoivohom-baovao vahiny (FCC), izay toniam-baovaon'i Financial Times rahateo. Nitranga izao fihetsika ara-politika izao rehefa nitarika resadresaka nifanaovana tamin'ny mpikatroka mpanohana ny fahaleovantena Andy Chan tao amin'ny FCC i Mallet.
Nokianin'ny FCC ny hetsika faramparany nataon'i Beijing hanitarana ny fandraràna ny fampitam-baovao amerikana hatrao Hong Kong amin'ny filazana izany ho “fanimbana ratsy dia ratsy” ny fotokevitra “Firenena Iray, Rafitra Roa”. Narovan'ny mpitondrateny iray ao amin'ny Biraon'ny Mpiadidy Shinoa ao Hong Kong ny hevitr'i Beijing ary nilazany ny FCC “hamantana ny fitarainany any amin'ny fitondram-panjakana amerikana, handrisihana ity voatonona farany ity hanova avy hatrany ny heviny, hiala amin'ny fanimbana, ary hampitsahatra ny famoretana ara-politika sy ny faneriterena ankitsirano ireo fikambanana fampitam-baovao shinoa.
Nilaza i Alvin Yeung, mpitarika ny antoko sivika Hong Kong fa “sambany” fa tsy mbola nataon'i Beijing ny manao valin-kafatra toy izao :
Toy ny mampihatra mivantana ny fahefany amin'ny departemantan'ny fifindramonina ao Hong Kong i Beijing ary mandrara ny famoahana fahazoan-dalana hiasa.
Navoitran'i Cédric Alviani, talen'ny biraom-paritra Reporters Sans Frontières ao Azia Atsinanana fa fikisahana mankany amin'ny “famelezana ny fahalalahan-gazety eto ambonin'ny tany” izao toe-javatra izao. Nosoritany:
Mampihatra sy mankatoa ny fotokevitry ny etikan'ny fanoratan-gazety—anatin'izany ny fahaleovantena eo amin'ny fizotran-dahatsoratra sy ny fanamarinana ny zavamisy hijerena ny tombontsoam-bahoaka—ireo media lasibatr'i Shina ireo nefa amin'ny fomba ofisialy dia mpitondratenin'ny Antoko Komonista Shinoa ireo mediampanjakana shinoa.
Nomarihan'i Christophe Deloire, sekretera jeneralin'ny RSF manokana ny mahazavadehibe ny fahalalahan-gazety ao anatin'ny fisian'izao areti-mandringana COVID-19 izao:
Misy fiantraikany ratsy dia ratsy teo am-panombohan'ny fihanaky ny valan'aretina coronavirus ny fifehezana tsirefesimandidy ny vaovao sy ny torohay nataon'i Beijing… Manana andraikitra mavesatra dia mavesatra manoloana ny olombelona rehetra ny filoha shinoa Xi Jinping.